Archive du 20170704
Fihaonana amin’ny sabotsy Tsy hihemotra ny TIM
Nivoaka ny vaovao amin’ny fanafoanana ny fahazoan-dàlan’ny Antoko Tiako I Madagasikara hankalaza ny faha-15 taona nijoroany ny sabotsy 8 jolay izao noho ny resaka fiahiahiana fanakorontanana (?) Araka ny nambaran’ny prefektiora.
Prefen’Antananarivo Mety hisy hanakorontana ny hetsiky ny TIM
Betsaka ny asa fanakorontanana mitranga amin’izao fotoana izao, hoy ny prefen’Antananarivo, Angelo Christian Ravelonarivo, omaly, tetsy amin’ny prefektiora etsy Tsimbazaza.
Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Nahatratra 1 miliara Ar ny volam-bahoaka voaodinkodina
Miavaka amin’ireo fitsarana roa misahana ny ara-panjakana sy mpanao famotorana ny tribonaly misahana ny fitantanana ara-bola.
Justice et paix Miantso famondronana hery
Namoaka sori-dalana hahafahana mampanjaka ny fahamarinana, fikatsahana ny fandriampahalemana ny Firaisamonim-pirenena “Justice et paix” sy ny K3F.
Horonam-peo niparitaka “Afaka mitory I Claudine R, hoy Rolly Mecia
Ny lalàna eto amintsika amin’ny ankapobeny dia tsy mahazo raisim-peo ny resaka ifanaovana amin’olona anakiray ary tsy azo avoaka ho fanta-bahoaka raha tsy manaiky izany sy nierana ilay olona.
Vahoakan’i Soamahamanina Tsy hanaiky ny fiverenan’ny Sinoa
Nanao fanambarana tetsy amin’ny biraon’ny sampana iombonana misahana ny fananantany (SIF) tetsy Ampefiloha omaly ireo solontenan’ny vahoakan’i Soamahamanina.
Depiote Nicolas sy ny Kaomandin'ny Zandarimaria Vaky ny ady eo amin’ny roa tonta
Nanambara tamin'ny fitafatafana fohy tamin'ny mpanao gazety, omaly teny Antaninarenina, ny Depiote Randrianasolo Jean Nicolas avy any Betroka fa vaky ny ady eo aminy sy ny kaomandin'ny Zandaramariam-pirenena.
Elysé Ratsiraka Hiasa hanatsara ny fiainam-bahoaka
Olana fototra eto Madagasikara ny sehatry ny fotodrafitrasa. Nijanona niaraka tamin’ny Repoblika voalohany tamin’ny taona 1972, ohatra, ny fanorenana ireo trano fonenana ho an’ny mponina.
Raha hiteny hoe Lany henatra ny mpitondra dia toa efa tsy izay intsony akory amin’izao fotoana izao no zava-misy fa tena efa manoatra lavitra mihitsy aza. Manala baraka firenena ve ?
Mpanala BEPC Maro no matahotra ny taranja kajy
Notanterahina nanomboka omaly alatsinainy 3 jolay manerana ny Nosy ny fanadinana BEPC taona 2017.
Mitovy hatrany ny valin-teny azo avy eo anivon’ny polisim-pirenena rehefa miresaka ny raharaha Antsakabary izay raharaha nahavoatonontonona ity rafi-pitandroam-pilaminana ity.